‘सरकारप्रति मतदाता निकै रुष्ट’ | Machhapuchhre News | माछापुच्छ्रे न्युज
‘सरकारप्रति मतदाता निकै रुष्ट’
पोखरा, २९ कात्तिक
नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार खेमराज पौडेलले पोखरा–२०, भलामतर्फको घरदैलो अभियान सकेर फर्किएका छन् । उनले २ दिन लगाएर यस क्षेत्रमा घरदैलो गरेका थिए । बिहीबार साविक भलाम–१ बाट अभियान शुरु गरेका पौडेलले डाँडाखोरसम्म घरदैलो गरेका थिए । शुक्रबार बिहान मौजा आँटीघर लगायतका क्षेत्रमा घरदैलो गरेका हुन् ।
उनले चुनाव प्रचारमा घर–घरमा पुग्दा मतदाता सरकारप्रति निकै रुष्ट भएको जानकारी दिए । ‘भलाम क्षेत्रका मतदाता यो सरकारप्रति निकै रुष्ट बनेका रहेछन् । मेरो उपस्थितिले उनीहरू केही शान्त भएका छन्’, उम्मेदवार खेमराजले भलामको घरदैलो सकेर पोखरा फर्किएपछि भने, ‘म सधैं तपाइँहरूकै साथमा र सुख दुःखमा रहनेछु भनेर प्रतिवद्धता जनाएको छु ।’
घरदैलो अभियान समापन कार्यक्रममा संयोजक विन्दुकुमार थापाले कम्युनिष्ट सरकारको रवैयाले जनता वाक्क दिक्क भएको बताए । उनले जनताको आशा र भरोषाको पार्टी कांग्रेस नै भएको मतदाताले अभिव्यक्त गरेको बताए ।
सांसद विन्दादेवी रानाले जनताको पहरेदार पार्टी कांग्रेसमात्र भएको भन्दै सरकारलाई ठीक ठाउँमा ल्याउन पनि कांग्रेसले जित्नै पर्ने बताइन् । उनले राज्यको चौथो अंगलाई त जेल हाल्न सक्ने सरकार अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको भन्दै यो सरकार संविधानको मर्म र भावना अनुसार चल्न नसकेको स्पष्ट पारिन् ।
वडासभापति चीनबहादुर गुरुङको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा नेताहरू दीपक गुरुङ, इन्द्र सापकोटा, काशीराम गुरुङ, महिला नेतृ शकुन्तला गुरुङले पनि कार्यक्रममा बोलेका थिए ।
शनिबार पोखरा–११ मा घरदैलो
उम्मेदवार खेमराजले शनिबार बिहानदेखि पोखरा–११ वडामा घरदैलो गर्ने कार्यक्रम छ । पोखरा–११ मा घरदैलो सकेर आइतबार उनी पोखरा–३३ पुग्नेछन् । पोखरा–३३ मा उनले २ दिन बिताउनेछन् । त्यहाँका मतदाता भेट्नेछन् । पोखरा–३३ पौडेलको पकड क्षेत्र मानिन्छ ।
पोखरा–३३ मा करिब ८ हजार मतदाता छन् । त्यसमध्येमा करिब ४ हजार मत कांग्रेसको पक्षमा आउने चुनाव प्रचार समितिका संयोजक एवं कांग्रेका केन्द्रीय सदस्य जीवन परियारले जानकारी दिए । करिब १५ दिनदेखि पोखरा–३३ मै रहेका नेता परियारले टोलिफोन संवाद गर्दै भने, ‘यस क्षेत्रमा कांग्रेसको माहोल निकै राम्रो छ । मतदाता पनि उत्साहित छन् । पार्टीको सबै संयन्त्र प्रयोग गरेर चुनाव प्रचार गरेका छौं ।’ उम्मेदवार खेमराज पौडेलको व्यक्तिगत छविका कारणले पनि पोखरा–३३ का मतदाता उत्साहित भएको नेता परियारले बताए । उनले भने, ‘कास्की कांग्रेसले उम्मेदवारसहितको घरदैलो २ दिनमात्र छुट्याएको छ । यति समय यो क्षेत्रका लागि निकै थोरै हो । तर भएको समयलाई सही सदुपयोग गर्दै सबै मतदातालाई उम्मेदवारसंग भेट गराउने हाम्रो योजना छ ।’
यता, पोखरा ११ मा पनि एक चरणको मतदाता भेटघाट कार्यक्रम सकिएको छ । शनिबार उम्मेदवारसहितको घरदैलो कार्यक्रम हुने चुनाव प्रचार समितिका सहसंयोजक एवं पार्टी सचिव सुदिप मोहन भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार चुनाव प्रचारका लागि नेपाल तरुण दल, महिला संघ, नेविसंघका नेता कार्यकर्ता परिचालन गरिएको छ । ‘पोखरा–११ मा करिब ६ हजार मतदाता छन् ती सबैलाई एक पटक भेट्ने योजना बनाएका छौं’, उनले भने । पोखरा–११ कांग्रेसकै बलियो क्षेत्र भएको भन्दै उनले यस पटक विगतको भन्दा १ हजार बढी मत कांग्रेसको पक्षमा आउने दावी गरे ।
यस्तै, पोखरा–२१ मा पनि कांग्रेसले घरदैलो अभियानमार्फत मतदाता भेटघाट कार्यक्रमलाई तीव्र बनाएको छ । चुनाव प्रचार समितिका संयोजक गुरु बरालका अनुसार पार्टीका सबै संयन्त्रको भेला गरि विभिन्न समिति गठन गरि तिनै समिति चुनावमा परिचालित गरिएको छ ।
‘वडाभित्र विभिन्न कलष्टर छुट्याएर मसिनो गरि चुनाप प्रचार र मतदाता भेटघाट गरेका छौं’, संयोजक बरालले भने । चुनाव प्रचारमा मतदाताको गुनासो सुन्ने काम गरिसकेको र अब पार्टीको प्रतिवद्धता लिएर पुनः एक पटक मतदाता भेट्ने योजना रहेको नेता बरालले बताए ।
‘पोखरा–२१ मा करिब ७ हजार ५ सय मतदाता छन् । त्यसमा करिब ४ हजार कांग्रेसको पक्षमा आउने मत हो’, उनले भने, ‘यस पटक ५ हजार मत कांग्रेसको पक्षमा ल्याउन प्रयत्न गरिरहेका छौं ।’ यस पटक कांग्रेसको पक्षमा निकै राम्रो माहोल बनेको उनले स्पष्ट पारे ।
यता, पोखरा–७ मा पनि घरदैलो अभियान जारी छ । अभियानमा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य डा. मिनेन्द्र रिजाल पनि सहभागी थिए । उत्तः अवसरमा नेता रिजालले कम्युनिष्ट अधिनायकवाद र रवैया नेपालमा टिक्न नसक्ने भन्दै यो निर्वाचनमा प्रजातन्त्रको रक्षा र राष्ट्रिय स्वाधीनताको खातिर पनि कांग्रेससलाई जिताउनुको विकल्प नभएको बताए ।
घरदैलोमा पार्टीका अर्का केन्द्रिय सदस्य गोबिन्द भट्टराई, नेता शुक्रराज शर्मा लगायत सहभागी भएको वडा सभापति नवीनराज बरालले जानकारी दिए ।
उम्मेदवार पौडेललाई आइतीश्रीको आशिर्वाद
कांग्रेस उम्मेदवार खेमराज पौडेललाई वृद्धवृद्धाको आशिर्वादको ओइरो लागेको छ । शुक्रबार बिहान ७ बजे नै पोखरा–२० को मौजा आँटीघर पुगेका उम्मेदवार पौडेललाई १०६ बर्षीय आईतश्री दमिनीले चुनावमा विजयको आशिर्वाद दिएका छन् । उनले भनिन्, ‘तिम्रो मुहार उज्यालो पाएँ । शिर उँचो पाएँ । तिमीले चालेका सबै पाइला सबै पाइला सफल होउन्, आशिर्वाद छ ।’
त्यस बेला उम्मेदवार पौडेलले आइतीश्रीको पाउ छोएका थिए । पौडेलले पनि आइतीश्रीको सुस्वाथ्य र दीर्घायूको कामना गरेका थिए । धेरै वर्ष अघि चिनेकी खेमराजलाई आफ्नौ घरमा आईतश्री निकै खशी भईन् । उनले भनिन्, ‘चुनाव जितेपछि हामीलाई नभल्नु है बाबु ।’ जवाफमा खेमराजले चुनाव पछि अवश्य भेट्न आउने बाचा गरे ।
उनले अहिलेसम्म ११ पटक मतदान गरिसकेकी छन् । उनीसंग मत माग्न आउने उम्मेदवार जितेर गए पछि कोही पनि आएका छैनन् । उनले भनिन्, ‘मेरो पाउ छोएर भोट धेरैले मागे । मैले भोट पनि दिएँ तर जितेपछि अहिलेसम्म कोही पनि फर्किएर मलाई भेट्न आएका छैनन् ।’ ‘उम्मेदवार पौडेलले संस्कृत विद्या पढेका छन् । उनले झुटो बोल्न हुँदैन । त्यसैले उनी आउँछन् भन्ने विश्वास छ’, उनले भनिन् ।
‘देशको इज्जतका लागि पनि कांग्रेसले चुनाव जित्नुपर्छ’
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं कास्की क्षेत्र नं. २ का चुनावी कमाण्डर डा. मिनेन्द्र रिजालले देशको इज्जतका लागि पनि यो चुनाव कांग्रेसले जित्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले यो चुनाव जितेर कम्युनिष्ट सरकारलाई पाठ सिकाउन आवश्यक रहेको बताए । ‘यो चुनाव जितेर सरकार परिवर्तन हुँदैन, कांग्रेस सत्तामा पनि पुग्दैन । कांग्रेसप्रति जनताको विश्वास कायमै छ भन्ने सन्देश दिन पनि यो चुनाव जित्नु अपरिहार्य छ’, नेता रिजालले भने ।
‘मुलुकमा लोकतान्त्रिक संविधान बनेको छ । सरकार त्यही संविधानमा टेकेर बनेको छ । तर सरकार अलोकतान्त्रिक काम गर्न उद्धत छ’, उनले भने, ‘संविधानको रक्षा गर्दै सरकारका अलोकतान्त्रिक गतिविधि रोक्न पनि यो चुनाव कांग्रेसले जित्न आवश्यक छ ।’
चुनावी अभियानका लागि कास्कीमा १ सातादेखि खटिएका नेता रिजाल पहिलो चरणको घरदैलो अभियान पश्चात् पार्टीका नेता कार्यकर्ता भेटघाटमा सक्रिय छन् । उनले पार्टीका सबै भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाका नेता कार्यकर्तासंग भेटेर चुनावी रणनीतिबारे जानकारी लिएका छन् ।
नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिंदै उनले भने, ‘यो चुनाव कांग्रेसका लागि गर या मरको अवस्थामा छ । त्यसैले यो चुनावका लागि पार्टीको नीति र निर्देशन लिएर जनतामा जानुस्, मतदाताई राम्रोसंग बुझाउनुस्, यो चुनाव जसरी पनि जित्नै पर्छ ।’ पार्टी र सिंगो मुलुकको इज्जत बचाउन भए पनि यो चुनाव कांग्रेसले जित्नुपर्ने नेता रिजालले स्पष्ट पारे । उनले पार्टीको भातृ तथा शुभेच्छक संघसंस्थाहरू नेपाल महिला संघ, नेपाल तरुण दल, नेविसंघ, शिक्षक संघ, जनजाति संघ, किसान संघ, नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस, नेपाल प्रेस युनियन, मुस्लिम संघका नेता कार्यकर्तासंग भेटघाट गरेका छन् ।
भेटघाटमा उनले भनेका छन्, ‘यो समय घरमा बसेर चिया गफ बेला होइन, मतदाता भेट्ने समय हो, त्यसैले अबको १० दिन कोही कसैले अन्यत्र समय खर्च नगर्नुस् ।’ ‘चुनाव पछि तपाइँहरू आआफ्नै काममा फर्किनुस् तर यो १० दिन पार्टीका लागि समय छुट्याउनुस् । अब ३ वर्ष पार्टीका लागि खट्नु पर्दैन’, नेता रिजालले भने ।
एलजी र नयाँगल्ली भिड्ने
नेपाल र भारत सीमा विवादबारे बाेल्याे चीन